“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခက်အခဲများကိုသိမြင်စွဲလမ်းမှု - အချိန်နှင့်အမျှဆက်ဆံရေးများကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းနှင့်အချိန်နှင့်အမျှဆန်းစစ်ခြင်း” (Critical On Porn On Your Brain) ၏ဝေဖန်မှု။
UPDATE 2016: Joshua Grubbs ၏ပြောဆိုချက်များနှင့်လေ့လာမှုများကိုပိုမိုပြည့်စုံသောလေ့လာဆန်းစစ်မှုကိုဤနေရာတွင်တွေ့ရှိနိုင်သည်။ Grubbs သည်သူ၏“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” သုတေသနပြုချက်ဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏မျက်လုံးများကိုသိုးမွှေးဆွဲနေသလား။ (၂၀၁၆)
UPDATE 2017: တစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ် (ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။, 2017) Joshua Grubbs မှတီထွင်ထားသည့်“ ရိပ်မိညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” မေးခွန်းလွှာဖြစ်သော CPUI-9 ကိုစမ်းသပ်ပြီးခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ပြီး၎င်းသည်“ အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု” ကိုတိကျစွာအကဲဖြတ်နိုင်ခြင်းမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည် or "ရူပါရုံစွဲ" (ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-9 ရမှတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive စဉျးစားကွညျ့သလား? Abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏အခန်းက္ပ Exploring) ။ ထို့အပြင် CPUI-1 မေးခွန်း၏သုံးပုံတစ်ပုံသည်“ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားခြင်း”၊ “ ဘာသာတရားဆိုင်ရာ” နှင့်“ ညစ်ညမ်းသောနာရီအသုံးပြုမှု” တို့နှင့်သက်ဆိုင်သောခိုင်လုံသောရလဒ်များကိုပြန်ပို့ရန်ချန်လှပ်ထားသင့်သည်။ တွေ့ရှိချက်များသည် CPUI-3 ကိုအသုံးပြုခဲ့သည့်သို့မဟုတ်၎င်းကိုအသုံးချသည့်လေ့လာမှုများအပေါ်မှီခိုခဲ့သည့်မည်သည့်လေ့လာမှုမှမဆိုကောက်ချက်အပေါ်သိသိသာသာသံသယများဖြစ်စေသည်။ လေ့လာမှုအသစ်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်ဝေဖန်မှုများသည်ဤကျယ်ပြန့်စွာဖော်ပြထားသောအရာများကိုထင်ဟပ်ပြသသည် YBOP ဝေဖန်မှု.
UPDATE 2018: Grubbs၊ Samuel Perry၊ Rory Reid & Joshua Wilt တို့၏ပြန်လည်သုံးသပ်မှုဟုယူဆရသည့် ၀ ါဒဖြန့်ချိရေးအပိုင်းအစ - သုတေသနက Grubbs, Perry, Wilt, Reid ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းသည် Disingenuous (“ ကိုယ်ကျင့်တရားမညီညွတ်မှုကြောင့်ညစ်ညမ်းသောပြProbleနာများ - စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့် Meta-analysis နှင့်အတူပေါင်းစည်းထားသောပုံစံတစ်ခု”) 2018 အားအကြံပြုသည်။
UPDATE 2019: သူကတိတ်ဆိတ်ဖို့ကြိုးစားနေမှာသူတို့ရဲ့မဟာမိတ်နီကိုးလ် Prause, မာတီ Klein နှင့်ဒါဝိဒ် Ley ပူးပေါင်းတဲ့အခါမှာယောရှုက Grubbs သည်သူ၏အစွန်းရောက်အစီအစဉ်-မောင်းနှင်ဘက်လိုက်မှုကိုအတည်ပြု YourBrainOnPorn.com။ Grubbs နှင့် www.realyourbrainonporn.com မှာအခြားအလိုလားသူ porn "ကျွမ်းကျင်သူများက" အတွက်စေ့စပ်နေကြတယ် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုနှင့်ကီထိုင်တရားမဝင်။ Grubbs တစ်အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစေလွှတ်စာတစ်စောင်ရပ်တန့်ခဲ့ပါတယ်, အရာလျစ်လျူရှုခဲ့ကြသည်။ ဥပဒေရေးရာလုပ်ရပ်များကို လိုက်. ခံရဖို့ဆက်လက်။
UPDATE 2019: နောက်ဆုံးတော့ Grubbs ကသူ့ကိုအားမကိုးခဲ့ပါ CPUI-9 တူရိယာ။ အဆိုပါ CPUI-93"အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲ / စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ" မေးခွန်းများကိုလည်းပါဝင်သည် ပုံမှန်အားဖြင့်စွဲလမ်းတူရိယာထဲမှာမတှေ့ ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုစွဲမှတ်စေပြီးဘာသာရေးနှင့်မသက်ဆိုင်သောသုံးစွဲသူများသည်စံစွဲစွဲ - အကဲဖြတ်သည့်ကိရိယာများမှဘာသာရပ်များထက်နိမ့်ကျသည်။ အဲဒီအစား, Grubbs ၏လေ့လာမှုအသစ်သည်ညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများအားတိုက်ရိုက်ဟုတ် / မဟုတ်မေးခွန်း ၂ ခုမေးခဲ့သည် ( "ငါအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်။ ""ကျွန်မအနေနဲ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစှဲလမျးသူကိုယ့်ကိုယ်ကိုခေါ်ဝေါ်သမုတ်မည်။ ") ။ ဒေါက်တာဂရော့ဘ်စ်နှင့်သူ၏သုတေသနအဖွဲ့သည်သူ၏ယခင်စွပ်စွဲချက်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်။ သင်သည်သင်၏အပြာစွဲစွဲစွဲလမ်းမှုကိုနေ့စဉ်နာရီအသုံးပြုမှုနာရီများနှင့်အလွန်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုတွေ့ရှိခဲ့သည် မဟုတ် ဘာသာရေးနှင့်အတူ။
UPDATE 2020: ဘက်မလိုက်သုတေသီ Mateuz Gola သည် Grubbs နှင့်ပူးပေါင်းခဲ့သည်။ Grubbs ၏ဆိုးဝါးလှသော CPUI-9 ကိုသုံးမည့်အစားလေ့လာမှုတစ်ခုက“ငါကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲဖြစ်ကြောင်းကိုယုံကြည်“ ၎င်းသည်ဘာသာရေးနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းမှုကိုမိမိကိုယ်တိုင်စွဲလမ်းသည်ဟုယုံကြည်သည်။ ကြည့်ပါ ကိုယ်ကျင့်တရားပျက်ပြားမှုပုံစံ (၂၀၁၀၉) ကြောင့်ညစ်ညမ်းသောပြProbleနာများကိုအကဲဖြတ်ခြင်း
ဒီနေရာတွင်ကနေ birthed အဆိုပါခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်အနည်းငယ်ရှိပါတယ် ဒီလေ့လာမှုအသစ် ယောရှုသည်ခ Grubbs, က Nicholas Stauner, ဂျူလီဂျေ Exline, Kenneth ဗြဲ Pargament နှင့်မဿဲဂျေ Lindberg (ခွငျးအားဖွငျ့Grubbs et al။ , 2015):
အနှစ်သာရအားဖြင့်လေ့လာမှု၏အဓိကပြောဆိုချက်မှာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သော“ စွဲလမ်းမှု” သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဆင်းရဲမှုနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်သည် ယခု porn ကြည့်ရှု၏နေ့စဉ်နာရီ။ အထက်ပါဆောင်းပါးတဦးတည်းအနေဖြင့်တစ်ဦးကောက်နုတ်ချက်:
ကိုစှဲအပြုအမူများ၏ဂျာနယ်စိတ်ပညာအတွက်တစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ်ဖြစ်ပါတယ် "ဟုမသက်ဆိုင်ဘဲမူလအမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲလာပြီးကျွန်မတို့"-ကြောင်းညစ်ညမ်းမှရိပ်မိစွဲစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, အမျက်ဒေါသနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုအပါအဝင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲ၏ပုံစံများနှင့်ဆက်စပ် -is ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ် ။ ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုယ်တိုင်ကခြင်း, စာရေးဆရာများကိုတွေ့, "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲဖို့အတော်လေးသက်ဆိုင်တဲ့။ " ခဲ့
အထက်ပါကိုးကားချက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့လေ့လာမည့်တိကျသည့်တိကျမှုများမရှိသော်လည်း၎င်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတန်ဖိုးဖြင့်ယူကြပါစို့။ စာဖတ်သူမှအမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောအကျင့်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်သင်သည်အပြာစွဲစွဲနေသော“ ယုံခြင်း” သည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြdistနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ သင်ယူဆောင်သွားသောအရာ - သင်သည်စွဲစွဲလမ်းသည်ဟုသင်မယုံနိုင်သေးပါက porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ကျန်းမာသည်။
Grubbs et al ။ ၏ပြောဆိုချက်နှင့်ရလဒ်ခေါင်းစီးများသည်ဤတွေ့ရှိချက်အပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ဘာသာရပ်များ၏လက်ရှိအသုံးပြုမှုနာရီသည် Grubbs ၏ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာ (Cyber) ၏ရမှတ်များနှင့် (လုံလောက်သောပြင်းထန်သည့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းစာရင်း“ CPUI”) ။ တစ်နည်းပြောရလျှင် အကယ်၍ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုအမှန်တကယ်တည်ရှိပါကစာရေးသူများ၏အမြင်တွင် CPUI ပေါ်ရှိလက်ရှိနာရီနှင့်ရမှတ်များအကြားတစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ကြားဆက်နွယ်မှုရှိသင့်သည်။ Grubbs et al ။ ထို့အပြင် "စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်း" သည် CPUI ၏ရမှတ်များနှင့်ဆက်နွယ်သော်လည်းလက်ရှိအသုံးပြုမှုနာရီနှင့်သိပ်မဆိုင်ပါ။
ဒီမှာပါ။ CPUI ကိုတိုင်းတာရန်သိပ္ပံနည်းကျအခြေခံမရှိပါရိပ်မိ စွဲလမ်းနေတယ်” လို့ပြောပေမယ့် ၀ ယ်ထားတဲ့ခေါင်းကြီးပိုင်းတွေအားလုံးကအဲ့ဒါပဲ။ “ စစ်မှန်သော” စွဲလမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်။ CPUI သည်“ ရိပ်မိ” အတွက်မည်သည့်အခါမျှအတည်ပြုခြင်းမခံခဲ့ရပါ။
Grubbs et al ။ ၏ပြောဆိုချက်များနှင့်အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမှုများသည်မှန်ကန်ရန်အတွက်အောက်ဖော်ပြပါနှစ်ခုစလုံးသည်မှန်ကန်ပြီးအမှန်တကယ်သုတေသနမှပံ့ပိုးရမည်။
1) က ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory (CPUI) သည်ညစ်ညမ်းမှုကို“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” အားအကဲဖြတ်ရမည် ဒါပေမယ့်မရ အမှန်တကယ် porn စွဲ။
Grubbs ကိုယ်တိုင် 9-item CPUI ကိုအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းမှုပြproblemsနာစာရင်းတစ်ခုအဖြစ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဤတွင်သူသည်သူသည်အခြားခိုင်လုံသောစွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှုများအစားသူသည်သုံးစွဲမှုထက်စွဲလမ်းမှုကိုတိုင်းတာနိုင်သည့်ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်စေရန်ဖန်တီးရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ တကယ်တော့ CPUI သည်ပုံမှန်စွဲစမ်းသပ်မှုများကဲ့သို့ပင်တူညီသောလက္ခဏာများ၊ လက္ခဏာများနှင့်စွဲခြင်းလက္ခဏာများကိုတိုင်းတာသည်။
လက်ရှိလေ့လာမှုမှာ Grubbs et al ။ သိပ္ပံနည်းကျအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲ, CPUI အပေါ်ဘာသာရပ်များ၏စုစုပေါင်းရမှတ်နှင့်အတူတူပြောရလျှင် "ရိပ်မိ porn porn" ဟူသောစကားစုကိုအသုံးပြုပါ။
2) အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ porn ကြည့်ရှု၏နာရီတူညီရပေမည်။
ဒါဟာသိပ္ပံနည်းကျစာပေအားဖြင့်ချေပထားသည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲ ≠ porn ကြည့်ရှု၏နာရီ။
ချောက်ခြားစရာကောင်းလောက်အောင်သည် Grubbs et al ။ လေ့လာမှုအမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုနာရီနှင့် CPUI အကြားခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့ပါသည်ထုတ်ဖော်ပြသ! p မှစ. ။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏ 6:
"ဒါ့အပြင်ပျမ်းမျှအား နာရီအတွင်းနေ့စဉ်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု ခဲ့ သိသိသာသာနဲ့အပြုသဘောစိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, အမျက်ဒေါသနှင့်အတူအဖြစ်နှင့်ဆက်စပ် ရိပ်မိစွဲ။ "
ပထမအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ဂရော့ဘ်စ်သည်သူ၏ကိုယ်ပိုင်စွဲလမ်းမှုမေးခွန်းလွှာ (CPUI) ကိုတီထွင်ခဲ့ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင်သူက“ ညစ်ညမ်းမှုအပေါ်စွဲစွဲလမ်းမှု” ကိုသာတိုင်းတာသည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ (တကယ်ပဲ!)
ဒုတိယအချက်နှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်သုတေသနအဖွဲ့များက“ နာရီအသုံးပြုမှု” သည်ဆိုက်ဘာဆက်ဆံမှုစွဲလမ်းမှု (သို့မဟုတ်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်း) နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာစွဲခြင်းကို“ နာရီပေါင်းများစွာ” ထက်အခြား variable များကပိုမိုတိကျစွာဟောကိန်းထုတ်သည်။ အထက်ပါကောက်နုတ်ချက်မှသင်မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ ဂရပ်ဘ်စ်သည်နာရီပေါင်းများစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆင်းရဲခြင်းကြားသိသိသာသာဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Grubbs et al ။ ၏ယူဆချက်များသည်အဘယ်ကြောင့်စစ်မှန်။ မထောက်ခံနိုင်ကြောင်းအသေးစိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာကြမည်။ သို့သော်သုတေသီများသည်၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များကိုအများပြည်သူအားလှည့်ဖြားခြင်းမပြုဘဲဖော်ပြနိုင်ပုံ
အဆိုပါချောက်ထဲဗားရှင်းမှတ်ချက်ပြု: စွဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲမှဆက်စပ်ဖြစ်တယ်, ဒါကြောင့်အသုံးပြုမှုနာရီဖြစ်ကြသည်။ ဒီတော့သိပ်အာရုံ-ဖမ်းဆုပ်, လေ့လာမှုအားဖြင့်မွေးထုတ်ခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်လှညျ့စားပါ။
CPUI သည်အမှန်တကယ် ၀ က်စွဲစွဲခြင်း (သို့)“ ရိပ်မိခြင်းစသောစွဲလမ်းမှု” ကိုအကဲဖြတ်သည်။
In Grubbs ၏ ၂၀၁၀ ခုနှစ်စာတမ်း သူသည် ၄၃ မေးခွန်းဖြစ်သော Cyber-Pornography Use Inventory (CPUI) ကိုအမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏အချို့သောရှုထောင့်များကိုအကဲဖြတ်သည့်မေးခွန်းလွှာတစ်ခုအဖြစ်အတည်ပြုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အဓိကသော့ချက်မှာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်စာတမ်းတွင်သူသည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောအသုံးအနှုန်းကိုမည်သည့်နေရာ၌မျှအသုံးပြုခြင်းမရှိပါ။ Grubbs ၏မူလစာတမ်းမှကောက်နုတ်ချက်များသည် CPUI မှမှန်ကန်သောညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုသာအကဲဖြတ်သည်။
အမူအကျင့်စွဲလမ်းမှုများကိုနားလည်ရန်အဆိုပြုထားသောယခင်ဖော်ပြထားသောမော်ဒယ်များသည်ဤလေ့လာမှုအတွက် Delmonico နှင့် Griffin (၂၀၀၈) ကတီထွင်ခဲ့သော Internet Sex Screening Test ပြီးနောက်ပုံစံပြုသည့် Cyber-Pornography Use Inventory (CPUI) ကိုအခြေခံသည့်သီအိုရီယူဆချက်များဖြစ်သည်။ ။ တီသူကဒီဇိုင်းစွဲလမ်းအပြုအမူတစ်ခုဟာအပြုအမူကိုရပ်တန့်နိုင်ခြင်း, ထိုအပြုအမူ၏ရလဒ်အဖြစ်သိသာထင်ရှားသောဆိုးကျိုးများ, နှင့်အပြုအမူနဲ့ generalized စွဲဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာကြောင်းနိယာမအပေါ်အခြေခံခဲ့ပါတယ် CPUI (Delmonico & Miller က, 2003) ။
အဆိုပါ CPUI အမှန်ပင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲအကဲဖြတ်ထားတဲ့တူရိယာအဖြစ်ဂတိတော်ကိုပြသထားဘူး။ ထိုကဲ့သို့သော ISST အဖြစ်ယခင်တူရိယာ, သွားရမည်အကြောင်း, သာကျယ်ပြန့်ရောင်စဉ်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွဲအကဲဖြတ်ခဲ့သည် ဒီစကေးအတိအကျကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအကဲဖြတ်အတွက်ဂတိတော်နှင့်စပ်ဆိုင်သောသရုပ်ပြပြုလေ၏။ ထို့ပြင်ယခင်ကစှဲပုံစံများကရှင်းပြသည်ပေါ်မှပစ္စည်းများကိုပစ္စည်းမူတည်နှင့်ရောဂါဗေဒလောင်းကစားတစ်ခု ICD နှစ်ဦးစလုံးအတှကျအဖြေရှာတဲ့စံနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာသီအိုရီထောက်ခံမှုနှင့်အလားအလာရှိသောဆောက်လုပ်ရေးတရားဝင်မှုအချို့အဆင့်ကိုတှေ့ရဟန်စကေး။
တိုက်ရိုက်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ရိပ်မိသို့ကိုအသာပုတ်ဟန်နောက်ဆုံးတွင်စှဲပုံစံများပေါ်တွင်ပစ္စည်းများငါးမူရင်း compulsive စကေးကနေစကေး သူတို့ပါဝငျထားတဲ့အတွက်အမူအကျင့်ကိုရပ်တန့်ဖို့ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း။ မည်သည့်အခြေအနေအရတစ်ဦးပြဿနာအပြုအမူကိုရပ်တန့်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်း SD နှင့် PG နှစ်ခုလုံးအတွက်အရေးပါသောအဖြေရှာတဲ့စံနှုန်းမသာဖြစ်တယ်, ဒါပေမဲ့ SD ဖြင့်ထင်ရှားကြောင့်လည်း, နှစ်ဦးစလုံးစွဲ၏အဓိကဒြပ်စင်တစ်ဦးအဖြစ်ယူဆနိုင်ပါတယ်နိုင်ပြီး, ICDs (Dixon က et အယ်လ်, 2007; ။ Pontenza, 2006) ။ ၎င်းသည်ရောဂါဖန်တီးသောဤနိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကြောင်းပုံရသည်။
တစ်ဦးအတွက် 2013 လေ့လာချက် Grubbs သည် CPUI မေးခွန်းအရေအတွက် ၄၃ မှ ၉ သို့လျှော့ချခဲ့ပြီးသူ၏အမှန်တကယ် porn စွဲလမ်းမှုကို“ ရိပ်မိသော porn စွဲလမ်းမှု” စမ်းသပ်မှုကိုပြန်လည်တင်သွင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၃ ခုနှစ်စာတမ်း၌“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုကိုအကြိမ်ပေါင်း ၈၀ အသုံးပြုရင်းသူမရှင်းပြဘဲရှင်းပြခဲ့သည်။ ရှင်းရအောင်။ Grubbs သည်သူ၏ CPUI ကိုအမှန်တကယ် porn စွဲလမ်းမှုကို“ ရိပ်မိသော porn စွဲလမ်းမှု” နှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအကဲဖြတ်ကိရိယာတစ်ခုအဖြစ်အတည်မပြုနိုင်ပါ။
ဘာကြောင့် CPUI ကိုညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုစမ်းသပ်မှုကို Joshua Grubbs ကဘာကြောင့်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခဲ့တာလဲ။
Grubbs ကိုယ်တိုင်သူ၏စမ်းသပ်မှုသည်အမှန်တကယ်စွဲလမ်းမှုမှရရှိနိုင်သည်ဟုမပြောသော်လည်းသူ၏ CPUI-9 တူရိယာပေါ်ရှိရမှတ်များအတွက်သူ၏ထင်မြင်ယူဆချက် (“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု”) ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အခြားသူများအားသူ၏တူရိယာတွင်စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုထင်မြင်စေခဲ့သည်။ "ရိပ်မိ" နှင့် "အစစ်အမှန်" စွဲအကြားခွဲခြားရန်။ ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲမှုအကဲဖြတ်ခြင်းနယ်ပယ်ကိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးစေခဲ့သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်အခြားသူများကမူသူမလုပ်ဆောင်နိုင်သည့်အထောက်အထားအဖြစ်သူ၏စာတမ်းများကိုအားထားနေရသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ "ရူပါရုံ" ကို "ရိပ်မိ" စွဲလမ်းမှုနှင့်ခွဲခြားနိုင်သည့်စမ်းသပ်မှုမရှိပါ။ ထိုကဲ့သို့သောတံဆိပ်ကပ်ခြင်းသာ ပြုလုပ်၍ မရပါ။
Josh Grubbs CPUI-9 နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းနှင့်၎င်းသည်ရလဒ်များကိုဆိုးဆိုးရွားရွားလွဲချော်စေသည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်းကဒေါက်တာယောရှုသည် Grubbs porn အသုံးပြုမှု, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏, သူ၏ 9-ကို item မေးခွန်းလွှာအပေါ်ရမှတ်များနှင့်အတူအခြားအ variable တွေကိုများ၏ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည် '' ယာနျဘာသာတရားကို, နာရီ "ဒီဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory" correlating လေ့လာမှုများတစ်စီးရီး (CPUI- ရေးသားထားသည် 9) ။ မိမိအတွေ့ရှိချက်တာနားလည်မှုလွဲဒေါက်တာ Grubbs ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတော်မူကြောင်းကိုတစ်ခုထူးဆန်းဆုံးဖြတ်ချက်ထဲမှာ ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ "အဖြစ်ကသူ့ဘာသာရပ်များ '' စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်ကိုရည်ညွှန်းသည်။သူကစွဲနေသည် perceives "(ထက်ဖြစ်ခြင်း" ဒီသည်သူ၏ CPUI-9 တူရိယာတစ်နည်းနည်းနဲ့မျှသာသောဘာသာရပ်ဖို့ဒီဂရီကိုညွှန်ပြကြောင်းမိစ္ဆာစှဲပေးသည် " တကယ်တော့ ) စွဲ။ သို့ရာတွင်အဘယ်သူမျှတူရိယာဒီတစ်ခုကြောင့်မနှင့်ဆက်ဆက်လို့မရပါဘူး။
ဒုစရိုက်ဖြေ, အရှက်ကွဲအကြောင်းကိုင်း၏သုံးဆိုတဲ့စကားလုံးမလိုတော့ဘူးမေးခွန်းများကိုနှင့်အတူအောက်ပါ 9-item ကိုညစ်ညမ်း-အသုံးပြုမှုမေးခွန်းလွှာပေါ်တွင်စုစုပေါင်းရမှတ်: ကအခြားသောလမ်းလို့ပြောရန်, ထားသောစာပိုဒ်တိုများ "ကိုရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ" နံပါတ်ထက်ပိုဘာမျှဖော်ပြသည်။ ဒါဟာ၏စည်းကမ်းချက်များ၌အဖျင်းအနေဖြင့်ဂျုံ sort ပါဘူး ရိပ်မိ vs. စစ်မှန်သော စွဲလမ်း။ မ CPUI-9 အကဲဖြတ်ရန်ပါဘူး အမှန်တကယ် porn စွဲ။
သငျသညျမွငျနိုငျသကဲ့သို့, CPUI-9 အမှန်တကယ် porn စွဲများနှင့်ညစ်ညမ်းစွဲမှာ "ယုံကြည်ချက်" အကြားခွဲခြားလို့မရပါဘူး။ ဘာသာရပ်များဆို Grubbs လေ့လာမှုတွင် "porn စွဲအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုတံဆိပ်ကပ်" ဘယ်တော့မှ။ သူတို့ကရိုးရိုးအထက်9မေးခွန်းများကိုဖြေကြားနှင့်တစ်ဦးစုစုပေါင်းရမှတ်ရရှိခဲ့သည်။
အဆိုပါ Grubbs လေ့လာမှုများအမှန်တကယ်အဘယ်အရာဆက်စပ်မှုသတင်းပို့ခဲ့တာလဲ (အထကျကရှင်းပြသည်ကဲ့သို့) စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ပေမယ့် လည်း related ဖို့ "တစ်ပတ်ကိုကြည့်ရှုအားပေး porn ၏နာရီ။ " တချို့ Grubbs ခုနှစ်တွင်အနည်းငယ်ပိုမိုအားကောင်းဆက်စပ်မှုကိုအခြားသူများအတွက်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ် ( "ရိပ်မိ porn စွဲ") အကြားဖြစ်ပွားခဲ့သည်လေ့လာနေ တစ်ဦးပိုမိုအားကောင်းဆက်စပ်မှု porn အသုံးပြုမှုနာရီနှင့်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ် ( "ရိပ်မိ porn စွဲ") နှင့်အတူဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
မီဒီယာအဆုံးစွန်သောတွေ့ရှိချက်များကိုလျစ်လျူရှုနှင့်ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ် (ယခု misleadingly တံဆိပ်ကပ် "ကိုရိပ်မိစွဲ") အကြားဆက်စပ်မှုပေါ်သို့ဆွဲများနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်သတင်းစာဆရာများသာဘာသာရေးကလူ "သို့တွေ့ရှိချက် morphed ယုံကြည် ။ သူတို့က porn စွဲနေ "မီဒီယာ porn အသုံးပြုမှု CPUI-9 ရမှတ်များနှင့်နာရီအကြားရုံ-အဖြစ်-ခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုကိုလျစ်လျူရှု, ဒါဝိဒ် Ley အားဖြင့်ဤ blog post ကိုနဲ့တူတိဆောင်းပါးများရာပေါင်းများစွာထွက် pumped: Porn စွဲ၌သင်တို့၏ယုံကွညျအရာပိုဆိုးတာကကို: "porn စှဲလမျးသူ" ၏တံဆိပ်စိတ်ကျရောဂါဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုမဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ဒီနေရာမှာတစ်ဦး Grubbs CPUI-9 လေ့လာမှု Ley ရဲ့တိဖော်ပြချက်ဖြစ်ပါသည်:
တစ်စုံတစ်ဦးကသူတို့တစ်တွေလိင်စှဲလမျးသူခဲ့ကြသည်ဟုယုံကြည်လျှင်, ဤယုံကြည်ချက်နေပါစေသူတို့ကအမှန်တကယ်ကို အသုံးပြု. ခဲ့ကြသည်ဘယ်လောက်, ဒါမှမဟုတ်ဘယ်လောက်နည်းနည်း, porn, မြစ်အောက်ပိုင်းစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံစားမှုတွေကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။
Ley ရဲ့မှားယွင်းစွာတင်ပြဖယ်ရှားခြင်း, အထက်ပါဝါကျတိကျစွာဖတ်ပါလိမ့်မယ်။ "တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲမေးခွန်းလွှာအပေါ်ရမှတ် (စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, စိတ်ဓာတ်ကျခြင်း, အမျက်ဒေါသ) နဲ့ဆက်နွယ်နေကြောင်းအဆိုပါ CPUI-9 အပေါ်အဆင့်မြင့်ရမှတ်က" မည်သည့်စွဲလမ်းမေးခွန်းလွှာအဘို့ဖြစ်လေ့ရှိတယ်ဘယ်လိုဘယ်။ ဥပမာအနေနဲ့အရက်ကိုအသုံးပြုခြင်းမေးခွန်းလွှာအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများပိုမိုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူပတျသကျ။ Big အံ့သြစရာ။
လူအပေါင်းတို့သည်သံသယရှိတောင်းဆိုမှုများနှင့်မေးခွန်းထုတ်စရာဆက်စပ်မှုဖို့အဓိကသော့ချက်: စိတ်ခံစားမှုဆိုင်ရာဆင်းရဲဒုက္ခမေးခွန်းများ (၇-၉) သည်ဘာသာရေးညစ်ညမ်းသောအသုံးပြုသူများကိုပိုမိုအမှတ်ရစေပြီးလောကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုသူများကိုမူ ပို၍ နိမ့်ကျစေသည်။ ထို့အပြင်“ ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာမကျေနပ်မှု” နှင့်စုစုပေါင်း CPUI-7 ရမှတ် (“ ရိပ်မိသောညစ်ညမ်းစွဲစွဲလမ်းမှု”) အကြားခိုင်မာသောဆက်စပ်မှုကိုဖန်တီးပေးသည်။ ) ။
သင်သာအသုံးပြုနိုင်သည်လျှင်အခြားသောလမ်းထားရန်, ၏လက္ခဏာနှင့်ရောဂါလက္ခဏာကိုအကဲဖြတ်ထားတဲ့ CPUI-9 မေးခွန်းများကို 1-6 (ထံမှရလဒ်များ အမှန်တကယ် စွဲ), အဆက်စပ်မှုသိသိသာသာပြောင်းလဲစေ -, အရှက်ကွဲဟုဆိုကာအပေါငျးတို့သသံသယရှိဆောင်းပါးတွေကို "စစ်မှန်သော" အကြောင်းမရှိ porn စွဲကျမ်းစာ၌ရေးထားပြီဘယ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်။
အနည်းငယ်ထှနျးဆက်စပ်မှုကိုကြည့်ဖို့, "ရဲ့ 2015 Grubbs စက္ကူ (ထံမှဒေတာကိုသုံးပါပါစေစွဲလမ်းမှုအဖြစ်လွန်ကျူး: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံမှခံစားစွဲလမ်း၏ခန့်မှန်းအဖြစ်စျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏") ။ ဒါဟာ3သီးခြားလေ့လာမှုများနှင့်၎င်း၏လိုက်စားခေါင်းစဉ်ညစ်ညမ်းစွဲထဲမှာစျယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ "အကြောင်းမရှိ" ဟုယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကြံပြုပါဝင်သည်။
table ထဲမှာနံပါတ်များကိုနားလည်ဘို့သိကောင်းစရာများ: သုညနှစ်ခု variable တွေကိုအကြားမျှဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်; 1.00 နှစ်ခု variable တွေကိုအကြားတစ်ဦးပြည့်စုံဆက်စပ်မှုကိုဆိုလိုသည်။ အရေအတွက်2variable တွေကိုအကြားဆက်စပ်မှုဟာပိုမိုအားကောင်းအဆိုပါပိုကြီး။
ကျနော်တို့ (Emotional ဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ) မရရှိခြင်း၏အဆိုပါ3အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲမေးခွန်းများကိုနှင့်အတူအားကောင်းဆက်နွယ်နေပါသည်ဘယ်လိုကိုယ်ကျင့်တရားကိုတွေ့မြင်ဤပထမဆက်စပ်မှုမှာတော့မရှိသေးပါကိုအားနည်းစွာအမှန်တကယ်စွဲ (မေးခွန်းများကို 1-6) အကဲဖြတ်ရန်ကြောင်းနှစ်ခုကတခြားကဏ္ဍများနှင့်အတူ။ အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမေးခွန်းများကိုကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ် ( "ရိပ်မိစွဲ") ၏အပြင်းထန်ဆုံးခန့်မှန်းဖြစ်စေ။
သာအမှန်တကယ် porn စွဲမေးခွန်းများကို (1-6) ကိုအသုံးပြုလျှင်မူကား, ထိုဆက်စပ်မှုကငျြ့တရားမရရှိခြင်း၏ (သိပ္ပံ-ပွောအတွက်, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏ porn စွဲ၏အားနည်းခန့်မှန်းဖြစ်ပါတယ်) နဲ့တော်တော်လေးအားနည်းနေတယ်။
ဇာတ်လမ်း၏ဒုတိယတစ်ဝက်အမှန်တကယ် porn စွဲမေးခွန်းများကို (3-1) porn အသုံးပြုမှုကိုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူစေ့စ့စပ်စပ်ပတျသကျနေစဉ်အတူတူ6စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ, porn အသုံးပြုမှုအဆင့်ဆင့်နှင့်အတူအလွန်ညံ့ဖျင်းပတျသကျဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါက3စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခမေးခွန်းများကိုရလဒ်များကို skew ဘယ်လောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့က "porn အသုံးပြုမှုနာရီ" နှင့်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ် ( "ရိပ်မိစွဲ") အကြားသို့လျှော့ချဆက်စပ်မှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။ ထို့နောက် CPUI-3 စမ်းသပ်မှုအပေါငျးတို့သ9ကဏ္ဍများများ၏ပေါင်းလဒ်စုစုပေါင်းပရိယာယ် Grubbs အားဖြင့် "ရိပ်မိစွဲ" အဖြစ် re-တံဆိပ်ကပ်သည်။ ထို့နောက်စိတ်ပိုင်းဖြတ် Anti-porn-စွဲတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ၏လက်မှာ, "ရိပ်မိစွဲ" သို့ morphs "ဟု porn စှဲလမျးသူအဖြစ်ဖော်ထုတ်မိမိကိုယ်မိမိ။ " ဒီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများကငျြ့ဝတျမရရှိခြင်း၏, သော CPUI-9 နှင့်အတူခိုင်ခံ့သောဆက်စပ်မှုအပေါ် pounced ပါပြီ အမြဲ ထုတ်လုပ်များနှင့် Presto! အခုသူတို့ "porn စွဲနေတဲ့ယုံကြည်ချက်အရှက်ကွဲခြင်းထက်ပိုပြီးအချည်းနှီးဖြစ်၏!", ထိုတောင်းဆို
ဒါဟာမေးခွန်းလွှာရဲ့ဖန်တီးသူ ( "ရိပ်မိ porn စွဲ" ၏တစ်ဦးအတိုင်းအရှည်ကဲ့သို့) သည်သူ၏3မေးခွန်းများကိုတံဆိပ်ကပ်ရန်ကိုအသုံးပြုသည်အဆိုပါအထင်မြင်မှားစေသောအသုံးအနှုန်းနဲ့ပေါင်းပြီးအခြားစွဲအကဲဖြတ်အတွက်မတွေ့ရှိ9အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုပေါ်တွင်တည်ဆောက်ကတ်များရာအိမ်ပါပဲ။
ကတ်များ၏ CPUI-9 အိမ်သူအိမ်သားတော်တော်များများ "ရိပ်မိညစ်ညမ်းစွဲ" ဒါမှမဟုတ်အမှန်တကယ်ညစ်ညမ်းစွဲတစ်ခုခုအကဲဖြတ်ရန်တစ်ခုတူရိယာအဖြစ် CPUI-2017 invalidates တစ်9လေ့လာမှုနှင့်အတူဆင်းဖရိုဖရဲရောက် လာ. , ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု Inventory-9 ရမှတ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုအတွက်အမှန်တကယ် compulsive စဉျးစားကွညျ့သလား? Abstinence ကြိုးပမ်းမှု၏အခန်းက္ပ Exploring။ ဒါဟာအစ CPUI-1 မေးခွန်းတွေ3/9"ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏", "ယာနျဘာသာတရားကို," နှင့် "porn အသုံးပြုမှုနာရီ related တရားဝင်ရလဒ်တွေကိုပြန်သွားဖို့ချန်လှပ်သင့်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ " သင်ဒီမှာအားလုံးသော့ချက်ကောက်နှုတ်ချက်တွေ့မြင်ဒါပေမယ့် ဖာနန်ဒက်ဇ et al ။ , 2018 ခု၏အမှုအရာထ:
ဒုတိယအချက်မှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက် CPUI-9 ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale များ၏ပါဝင်၏သင့်လျော်သောရက်တွင်သံသယကိုသွန်းလေ၏။ အဖြစ်တသမတ်တည်းမျိုးစုံလေ့လာမှုများကိုဖြတ်ပြီးတွေ့ရှိခဲ့ (ဥပမာ Grubbs et al ။ , 2015a, ဂ) ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း IP ကိုအသုံးပြုအကြိမ်ရေစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ ပို. အရေးကြီးသည်, ပစ္စုပ္ပန်လေ့လာမှုမှာ conceptualized အဖြစ်အမှန်တကယ် compulsive (ပျက်ကွက် abstinence ကြိုးစားမှု abstinence အားထုတ်မှု x) စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များနှင့်အတူအဘယ်သူမျှမကြားဆက်ဆံရေးရှိခဲ့ပါတယ်။
စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခရမှတ်များသိသိသာသာလည်းနှစ်ခုအကြားသိသိသာသာထပ်နေသည်ကိုတွေ့ရှိရသည့်ယခင်လေ့လာမှုများနှင့်အညီ, ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အားဖြင့်ဟောကိန်းထုတ်ခဲ့ကြသည် (Grubbs et al, 2015a; ။ အလိုရှိ et al, 2016 ။ ) ... ။ ထိုကဲ့သို့သောသကဲ့သို့, CPUI-9 ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale များ၏ပါဝင်မှုကငျြ့တရားညစ်ညမ်းသဘောမတူတဲ့သူက IP အသုံးပြုသူစုစုပေါင်းရိပ်မိစွဲရမှတ် inflates နှင့် IP ကို၏စုစုပေါင်းရိပ်မိစွဲရမှတ် deflates ကြောင့်ထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ရလဒ်တွေကို skew စေခြင်းငှါ, မြင့်မားသော compulsive ရမှတ်များခံစားကြသူအသုံးပြုသူများသည်ဒါပေမယ့်ညစ်ညမ်း၏အနိမ့်ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏။
အဆိုပါစိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ subscale အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးလူဦးရေနှင့်အတူအသုံးပြုရန်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည့်တစ်ဦးကိုမူလ "ပွစျရှိသညျဟူသော" စကေးပေါ်တွင်အခြေခံကြောင့်ဤသည်ဖြစ်နိုင်သည် (Grubbs et al ။ , 2010), နှင့် Non-ဘာသာရေးလူဦးရေနှင့်အတူ၎င်း၏ utility ကိုနောက်ဆက်တွဲတွေ့ရှိချက်များအလငျး၌မရေမရာဖြစ်နေဆဲ ဒီစကေးနှင့်ဆက်စပ်သော။
ဤတွင်ဖြစ်ပါတယ်င် အ အဓိကတွေ့ရှိချက်: အဆိုပါ3"စိတ်ခံစားမှုဆင်းရဲခြင်းဒုက္ခ" မေးခွန်းများကို အဆိုပါ CPUI-9 မနေရာရှိသည်, ဒါမှမဟုတ်မည်သည့်ညစ်ညမ်းစွဲမေးခွန်းလွှာ။ ဤရွေ့ကားအပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲမေးခွန်းများကိုပြုပါ မဟုတ် စွဲလမ်းစေ porn ကိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒုက္ခဆင်းရဲအကဲဖြတ်ရန် "စွဲလမ်း၏အမြင်။ " nonreligious porn စွဲများအတွက်စုစုပေါင်း CPUI-3 ရမှတ်များထိခိုက်ပျက်စီးစေလျက်ရှိသည်နေချိန်မှာအဲဒီ9မေးခွန်းများကိုမျှသာသူတွေဟာဘာသာရေးလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးချင်းများအတွက်စုစုပေါင်း CPUI-9 ရမှတ်များဖောင်းပွ။
အဆိုပါ CPUI-9 အပြစ်ရှိတယ်, အရှက်ကွဲအကဲဖြတ်3ဆိုတဲ့စကားလုံးမလိုတော့ဘူးမေးခွန်းများကိုထည့်သွင်းသောကြောင့်, ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများသည် '' CPUI-9 ရမှတ်များအထက်သို့ skewed ခံရဖို့လေ့။ ဘာသာရေး porn အသုံးပြုသူများအတွက်ပိုမိုမြင့်မား CPUI-9 ရမှတ်၏တည်ရှိမှုထို့နောက်ကြောင်း, "ဆိုသကဲ့သို့မီဒီယာမှကျွေးမွေးခဲ့သည်ဘာသာရေးကလူမဟုတ်မမှန်သူတို့ porn စွဲဖြစ်ကြသည်ယုံကြည်။ "ဒီအတော်ကြာလေ့လာမှုများအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်ခဲ့သည် CPUI-9 ရမှတ်များနှင့်အတူ correlating ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အဖြစ်ဘာသာရေးကလူစုစုပေါင်း CPUI-9, (အရှင်) ကိုယ်ကျင့်တရားမရရှိခြင်း၏အပေါ်ပိုမိုမြင့်မားဂိုးသွင်းနှင့်ကတည်းက ဒါကြောင့်အသံထွက်ခဲ့သည် ဘာသာရေး-based ကငျြ့ဝတျမရရှိခြင်း၏ယင်းကြောင်း (အမှန်တကယ်ထောက်ခံမှုမပါဘဲ) စစ်မှန်တဲ့ ညစ်ညမ်းစွဲ၏အကြောင်းမရှိ။ ဒါကတော်တော်လေးခုန်နှင့်သိပ္ပံများ၏ကိစ္စအဖြစ်ညျမတရားမှုပါပဲ။
အဆိုပါ CPUI-9 နှင့် "ရိပ်မိစွဲ" ၏ဒဏ္ဍာရီဖော်ထုတ် YouTube ကိုတင်ဆက်: ညစ်ညမ်းစွဲနှင့်ခံစားစွဲလမ်း
သုံးစွဲမှုလက်ရှိနာရီ Porn စွဲရန် Related မ Are
Grubbs et al ။ ၏နိဂုံးသည်အဓိကအားဖြင့်မှားယွင်းသောယူဆချက်အပေါ်အခြေခံသည်။ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်သာအကဲဖြတ်နိုင်သည်။ Grubbs et al အဖြစ်။ သူတို့၏ဘာသာရပ်များတွင် (သူတို့၏အမြင်တွင်) အတော်အသင့်ဆက်စပ်မှုကိုမတွေ့ရှိခဲ့ပါကသူတို့၏ဘာသာရပ်များသည်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းခြင်း” မျှသာဖြစ်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။ Grubbs et al ။ ၏ပြောဆိုချက်သည်အလွန်ကြီးမားသောသံသယဖြစ်စေသည်။
အစောပိုင်းကဖော်ပြထားသကဲ့သို့, ပထမဦးဆုံး gaping ပေါက်ကြောင်း Grubbs et al ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်တကယ်အသုံးပြုမှုနာရီနှင့် CPUI အကြားတစ်ဦးတော်တော်လေးခိုင်မာတဲ့ဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့! p မှစ. ။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏ 6:
စာနယ်ဇင်းများကိုရပ်လိုက်ပါ ဤကောက်နှုတ်ချက်သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်သောကရောက်ခြင်းသို့မဟုတ်“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” နှင့်လုံးဝဆက်စပ်မှုမရှိဟုဆိုထားသည့်ခေါင်းစီးများအားလုံးနှင့်တိုက်ရိုက်ဆန့်ကျင်သည်။ တနည်းကား၊ “ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” ဟူသောစကားစုကိုသင်တွေ့သည့်အခါ၎င်းသည်ညစ်ညမ်းမှုဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုဖြစ်သော CPUI ရှိဘာသာရပ်များ၏စုစုပေါင်းရမှတ်ကိုအမှန်တကယ်ဖော်ပြသည်။
ဒီအပေါငျးတို့သညျအခွားနညျးလမျးပြောပါရန်: စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခဆင်းရဲများနှင့် CPUI နှစ်ဦးစလုံးရမှတ်များသိသိသာသာအသုံးပြုမှုနာရီဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ မည်သည့်သတင်းစာဆရာသို့မဟုတ်ဘလော့ဂါအစဉ်အဆက်အနေနဲ့အမှန်တကယ်လေ့လာမှုကိုဖတ်ရှုပါသလား?
ဒီလေ့လာမှုရဲ့အခြေခံအုတ်မြစ်မှာသင်ထရပ်ကားတစ်စီးကားမောင်းနိုင်။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ဗီဒီယိုဂိမ်းကစားခြင်းကိုသုတေသနပြုခြင်းဖြစ်သည်။1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) သတင်းပေးပို့ထားပါတယ် ကြောင်းမ စှဲမွဲမှု အသုံးပြုမှုနာရီနှင့်ဆက်နွယ်နေပါသည်။ 'hours of use' ပြောင်းလဲမှုသည်စိတ်မချရသောအလွဲသုံးစားမှုအတိုင်းအတာဖြစ်ပြီးစွဲမြဲနေသောအကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုကိရိယာများသည်အခြားအချက်များ (CPUI တွင်ဖော်ပြထားသောကဲ့သို့) ကို အသုံးပြု၍ စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်သည်။ Grubbs ချန်လှပ်ထားခဲ့သည့်အောက်ပါဆိုက်ဘာဆက်နွယ်မှုဆိုင်ရာလေ့လာမှုများသည်နာရီနှင့်စွဲလမ်းမှုလက္ခဏာများအကြားဆက်နွယ်မှုအနည်းငယ်သာရှိသည်။
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုစွဲလမ်းအစီအမံအပေါ်ပိုမိုမြင့်မားရမှတ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏နေ့စဉ်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုမကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ သို့သျောလညျး ရလဒ်စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ကျရောဂါနှင့်အသက်နှင့်ဆက်ဆံရေးဟာစိတ်ကျေနပ်မှုနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ရုန်းကန်မှုများ၏ပမာဏနှင့်ကြိမ်နှုန်းအကြားမျှတိုက်ရိုက်လင့်ခ်ရှိကွောငျးကိုညွှန်ပြ. မြင့်မားသောအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲရမှတ်မှသိသိသာသာဆက်စပ်အင်တာနက်ညစ်ညမ်း, ဗွီဒီယိုဂိမ်းများကိုမှစွဲလမ်းနှင့်ဖြစ်ခြင်းအထီးတစ်ခုအစောပိုင်းပထမဦးဆုံးထိတွေ့မှုလည်းပါဝင်သည်။ ယခင်အင်တာနက်စာမျက်နှာများတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှု၏အချို့သောအပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များသည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအလယ်အလတ်သို့မဟုတ်ပုံမှန်အတိုင်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုလည်ပတ်မှုတိုးတက်လာသည်ဟုမဖော်ပြပါ။
ထို့ကြောင့်, အစကတည်းကမှဤလေ့လာမှုနှင့်၎င်း၏အခိုင်အမာပြိုကျ ယင်း၏ကောက်ချက်စွဲ၏ခိုင်လုံသောအတိုင်းအတာအဖြစ်ဘာသာရပ်များအားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြစွဲ / ပြဿနာများ / ရောက်သောအဆင့်နဲ့တွဲသုံး၏လက်ရှိနာရီ equating အပေါ်၌ကျိန်းဝပ်သောကွောငျ့။
အဘယ်ကြောင့်စွဲဆေးအထူးကုများသည်နာရီပေါင်းများစွာအားမမှီပါသနည်း “ သင်လက်ရှိစားရန် (အစာစားရန်အတွက်) ဘယ်လောက်အထိသုံးစွဲနေသလဲ” ဟုမေးရုံဖြင့်စွဲလမ်းမှုကိုအကဲဖြတ်ရန်ကြိုးစားနေသည်ဆိုပါစို့။ သို့မဟုတ်“ လောင်းကစားကိုဘယ်လောက်ကြာကြာသုံးတာလဲ။ သို့တည်းမဟုတ်“ အရက်သေစာသောက်စားခြင်းကိုသင်ဘယ်နှစ်နာရီသောက်ပါသလဲ။ ” နာရီမည်မျှအသုံးပြုမည်ကိုပြသရန်အရက်ကိုဥပမာအဖြစ်စဉ်းစားပါ။
တစ်ဦးက 45 နှစ်အရွယ်အီတလီလူကိုညစာအတူညတိုင်းစပျစ်ရည်2မျက်မှန်သောက်သုံးတဲ့အစဉ်အလာရှိပါတယ်။ မိမိအမုန့်ညက်, မိမိတိုးချဲ့မိသားစုနှင့်အတူနှင့် (yakking အများကြီး) ဖြည့်စွက်ရန်3နာရီကြာပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူက3နာရီညဥ့်, တစ်ပတ်ကို 21 တစ်နာရီသောက်။
အသက် ၂၅ နှစ်အရွယ်စက်ရုံအလုပ်သမားသည်တနင်္ဂနွေနေ့များတွင်သာသောက်သည်၊ သို့သော်သောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ညတို့တွင်အရက်သောက်ခြင်းသို့မဟုတ်ဖျားနာခြင်းအထိအရက်သောက်သည်။ သူသည်သူ၏လုပ်ရပ်များအတွက်နောင်တရပြီးရပ်တန့်ရန်ဆန္ဒရှိသည်။ သို့သော်မူးယစ်ဆေးဝါးမသောက်ရ၊ တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခြင်း၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရန်လိုခြင်းစသဖြင့်မလုပ်နိုင်တော့ပါ။ သို့သော်သူသည်တစ်ပတ်လျှင် ၈ နာရီသာသောက်ခဲ့သည်။
ဘယ်သောက်သူမှာပြproblemနာရှိပါသလဲ ထို့ကြောင့်“ လက်ရှိအသုံးပြုသောနာရီ” တစ်ခုတည်းကမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုမည်သူမည်ဝါသည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားမပြောပြနိုင်ပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့အဘယ်ကြောင့် Grubbs et al ကိုမေးရပေမည်။ အခြားနှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အတည်ပြုစွဲစမ်းသပ်မှုအလွယ်တကူမရရှိနိုင်ခဲ့ကြသည့်အခါ CPUI ကိုဖန်တီးရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
အောက်ဆုံးလိုင်း: လေ့လာမှု၏အဆိုအရ“ လက်ရှိအသုံးပြုသောနာရီများ” သည်စစ်မှန်သောစွဲလမ်းမှုအတွက်ခိုင်လုံသောသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ခြင်းအပေါ်မူတည်သည်။ သူတို့မဟုတ်။ ထို့အပြင်သင်စိတ္တဇကိုဖြတ်သန်းသွားသည်နှင့်တပြိုင်နက်လေ့လာမှုအပြည့်အစုံတွင်“ လက်ရှိအသုံးပြုသောနာရီများ” သည်အမှန်တကယ်တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒုက္ခနှင့် CPUI ရမှတ်များနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ဟုဖော်ပြသည်။
“ လက်ရှိအသုံးပြုသောနာရီများ” သည်အမျိုးမျိုးသောပြောင်းလဲမှုများကိုချန်လှပ်ထားသည်
တစ် ဦး ကအလယ်တန်းအတိုင်းအတာများပြproblemနာ Grubbs et al ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာသာရပ်များအား“ လက်ရှိညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုမှုနာရီ” အကြောင်းမေးမြန်းခြင်းဖြင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကိုအကဲဖြတ်သည် ထိုမေးခွန်းသည်မရေမရာဖြစ်နေသည်။ ဘယ်ကာလအတွင်းမှာလဲ။ ဘာသာရပ်တစ်ခုက“ မနေ့ကငါဘယ်လောက်အထိသုံးခဲ့တာလဲ။ ” နောက်ထပ် "ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျော်?" သို့မဟုတ်“ မလိုလားအပ်သောဆိုးကျိုးများကြောင့်ကြည့်ရှုခြင်းမှထွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ပြီးချိန်တွင်?” ရလဒ်မှာနှိုင်းယှဉ်။ မရသောအချက်အလက်များကိုယုံကြည်စိတ်ချရသောကောက်ချက်ဆွဲရန် ရည်ရွယ်၍ ဆန်းစစ်။ မရပါ။
ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာလေ့လာမှု၏ကောက်ချက်အပေါ်မူတည်နေသော“ လက်ရှိညစ်ညမ်းမှုအသုံးပြုခြင်း” မေးခွန်းသည်ညစ်ညမ်းမှု၏အဓိကပြောင်းလဲနိုင်သောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရန်ပျက်ကွက်ခြင်း - အသက်အရွယ်စတင်ခြင်း၊ နှစ်ပေါင်းများစွာအသုံးပြုသူသည်ညစ်ညမ်းသောအမျိုးအစားအမျိုးအစားများသို့မြင့်တက်လာခြင်းသို့မဟုတ်မမျှော်လင့်သောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတီထွင်ခြင်းရှိမရှိ - မေးခြင်းဖြစ်သည်။ ညစ်ညမ်းမှုနှင့်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်မပါဘဲသုတ်ရည်လွှတ်မှုအချိုး၊ တကယ့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ် ဦး နှင့်လိင်ပမာဏစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ထိုမေးခွန်းများသည်“ လက်ရှိအသုံးပြုနေသောနာရီများ” ထက်စာလျှင်ညစ်ညမ်းမှုနှင့်အမှန်တကယ်ပြwhoနာရှိနေသောသူများအကြောင်းပိုမိုသိရှိစေလိမ့်မည်။
Grubbs et al နိဒါန်းနှင့်ဆွေးနွေးမှုအပိုင်းများတွင်။ စာဖတ်သူများကိုသိပ္ပံနည်းကျစာပေများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲကပ်ခြင်းမရှိကြောင်းပြသနိုင်စေရန်ဆယ်စုနှစ်များစွာစိတ်ကြွဆေးဆိုင်ရာသုတေသနနှင့် (အခြားအကဲဖြတ်ကိရိယာများ) ကိုစွန့်ပစ်ပစ်လိုက်သည်။ အစစ်အမှန်) ။ ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအသစ်တစ်ခုသည်ဤရန်တွေ့မှုသည်မည်မျှအထိဝေးဝေးသွားသည်ကိုဖော်ပြသည်။ ကြည့်ပါ အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကိုမကြာသေးခင်မှ neuroscience နှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများသည်မိမိတို့ကိုယ်ကိုအပေါ် neuropsych လေ့လာမှုများနှင့်အတူစွဲမှ neuroscience သုတေသနဆယ်စုနှစ်များစွာ aligns ရာ။ ထိုသို့အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအတော်လေးကိုမှန်ကန်နှင့် (အခြားသက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှု 100 ဦးနှောက်လေ့လာမှုများထက်ပိုအဖြစ်ရာပေါင်းများစွာအပေါ်အခြေခံပြီး) အင်တာနက်စွဲလမ်း၏တကယ်တော့အပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ဖြစ်ပါသည် (ယုတ်တိများနှင့်သိပ္ပံနည်းကျ) အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
သူတို့ရဲ့အဖွင့်အပိုဒ်များတွင် Grubbs et al ။ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ပြောဆိုချက်ကို အခြေခံ၍ သူတို့၏နက်ရှိုင်းသောဘက်လိုက်မှုများကိုသရုပ်ပြပါ။ ကိုယ်တိုင်တင်ဆက်ထားသော“ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုစွဲလမ်းမှုပြdebနာနှစ်ခု” ၏စာတမ်းများတွင်ရေးသားသူ - David Ley၊ လိင်စွဲလမ်း၏သွန်သင်ချက်အမှား, နှင့်သူ၏အလုပ်ဟောင်းက UCLA မှသုတေသီနီကိုးလ် Prause, တရားဝင်များအတွက်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာပေဝေဖန်ထားသည် အားနည်းနည်းစနစ် နှင့် မထောက်ပံ့ကောက်ချက်.
ဥပမာအားဖြင့်, Grubbs et al ။ အပေါ်အားကိုး တစ်ဦးတည်းတဖက်သတ်စက္ကူ Ley, Prause နှင့်ပြန်လည်သုံးသပ်သူဟုပြောဆိုသောသူတို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Peter Finn မှ (ဆိုလိုသည်မှာ၊ လက်ရှိစာပေကိုဘက်မလိုက်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု) ။ သို့သော်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများကိုတွေ့ရှိခဲ့သည့်လေ့လာမှုတိုင်းကိုချန်လှပ်ထားခြင်းသို့မဟုတ်လွဲမှားစွာဖော်ပြခြင်းနှင့်အင်တာနက်စွဲစွဲသူများ၏ ဦး နှောက်တွင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာ ဦး နှောက်ပြောင်းလဲမှုများကိုပြသသောမကြာသေးမီကအင်တာနက်စွဲမှုလေ့လာမှုများကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ (line-by-line ကိုဝေဖန်မှုကဒီမှာတွေ့နိုင်ပါသည်.)
Grubbs et al ။ သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဦး နှောက်ကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးခြင်းနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေ့လာမှုတိုင်းကိုညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုထောက်ခံသည့်အထောက်အထားများတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာစုဆောင်း) ။ အစားအများကြီးချန်လှပ်လေ့လာမှုများအနေဖြင့်ခက်ခဲသိပ္ပံပညာ၏, စာဖတ်သူတစ်ဦးအငျတာနကျပရိုနိဂုံးချုပ်ပေးထား:
ပေါင်းလဒ်အတွက်များစွာသောတစ်ဦးချင်းစီကိုပင်ထိုကဲ့သို့သောရောဂါ subsume မှဆေးခန်းမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုရောဂါ၏မရှိခြင်းအတွက်, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲခံစားရကြောင်းအကြံပြုသက်သေအထောက်အထားတစ်ခုတရားမျှတတဲ့ငွေပမာဏလည်းမရှိ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တစ်ခုတည်းသောအာရုံကြောလေ့လာမှု (porn စွဲ refuting အဖြစ် Grubbs အားဖြင့်ကိုးကားသံမဏိ et al။ ) ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုပုံစံကိုအမှန်တကယ်ထောက်ခံသည်။ သံမဏိ et al ။ ဘာသာရပ်များသည်ညစ်ညမ်းဓါတ်ပုံများနှင့်ထိတွေ့မိသည့်အခါပိုမိုမြင့်မားသော EEG ဖတ်ခြင်း (P300) ကိုဖော်ပြခဲ့သည်။ လေ့လာမှုများအနေဖြင့်စွဲသူများသည်၎င်းတို့၏စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သောပုံများ (ပုံများ) နှင့်ထိတွေ့သောအခါမြင့်မားသော P300 ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းဖော်ပြသည်။ ထို့အပြင်လေ့လာမှုအရအပြာများသည်လိင်နှင့်သက်ဆိုင်သောလိင်ဆက်ဆံလိုမှုနည်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ရလဒ်မှာမည်သည့်ရလဒ်မျှခေါင်းစဉ်များနှင့်ကိုက်ညီခြင်းမရှိသောကြောင့် Grubbs သည်မူရင်းစာရေးသူများ (“ ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှု၏ပြersနာများ”) ၏မှားယွင်းသောကောက်ချက်ကိုဆက်လက်တည်တံ့စေခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းသောစွဲလမ်းမှုမရှိခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်း၏ထောက်ခံမှုမရှိသောကောက်ချက်နှင့်ဘက်လိုက်သောပြောဆိုမှုများကြောင့် Grubbs et al ။ တိကျသောအစီအစဉ်တစ်ခုနှင့်ကိုက်ညီရန်ဤလေ့လာမှုကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည် - ညစ်ညမ်းစွဲလမ်းမှုကို“ ရိပ်မိစွဲလမ်းမှု” အဖြစ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ရန်နှင့်ညစ်ညမ်းမှုကိုအန္တရာယ်ကင်းသည်ဟုစာဖတ်သူများအားဖျောင်းဖျပြောဆိုရန်နှင့်၎င်းသည်အန္တရာယ်ရှိသည်ဟုယုံကြည်ရန်သာစိုးရိမ်ရန်လိုအပ်သည်။ Agnotology မစ်ရှင်ပြီးမြောက်ပြီ
ထိုစကားကိုစိတ်ထဲမှကြွလာ: ယင်းစိတ္တဇပေးတတ်၏, အပြည့်အဝလေ့လာမှုသိမ်းယူကဘာလဲ။ Grubbs et al အားဖြင့်မွေးထုတ်အဆိုပါခေါင်းကြီးပိုင်းတွင်နှင့်တောင်းဆိုမှုများ။ ပင်နောက်ခံလေ့လာမှုကထောက်ခံကြသည်မဟုတ်။ ပိုပြီးမြင်ဘို့: ယောရှုသည် Grubbs သူ၏ "ရိပ်မိ porn စွဲ" သုတေသနနှင့်အတူငါတို့မျက်မှောက်ကျော်သိုးမွှေးဆွဲသလဲ? (2016)
ယာနျဘာသာတရားကိုနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု (2014) အကြားဆက်ဆံရေး